42 Coin စျေး - အွန်လိုင်း 42 ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို 42 Coin (42)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ 42 Coin (42) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ 42 Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $843 971.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ 42 Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
42 Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
42 Coin42 သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$33025.142 Coin42 သို့ ယူရိုEUR€27943.342 Coin42 သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£25165.8242 Coin42 သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.30050.7342 Coin42 သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr294418.7642 Coin42 သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.208097.7542 Coin42 သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč729642.642 Coin42 သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł122935.9342 Coin42 သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$43744.8242 Coin42 သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$46171.242 Coin42 သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$730127.1542 Coin42 သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$255959.3842 Coin42 သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$177678.3442 Coin42 သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2473807.7942 Coin42 သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5575920.5442 Coin42 သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$45302.2842 Coin42 သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$50482.8342 Coin42 သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1027592.4742 Coin42 သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥229524.4442 Coin42 သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3519435.2742 Coin42 သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩39188903.0142 Coin42 သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦12755284.0242 Coin42 သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2417717.9742 Coin42 သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴902842.87
42 Coin42 သို့ BitcoinBTC2.86 42 Coin42 သို့ EthereumETH86.03 42 Coin42 သို့ LitecoinLTC607.33 42 Coin42 သို့ DigitalCashDASH363.94 42 Coin42 သို့ MoneroXMR370.87 42 Coin42 သို့ NxtNXT2576287.98 42 Coin42 သို့ Ethereum ClassicETC4867.9 42 Coin42 သို့ DogecoinDOGE9531704.1 42 Coin42 သို့ ZCashZEC400.92 42 Coin42 သို့ BitsharesBTS1017503.3 42 Coin42 သို့ DigiByteDGB1056803.17 42 Coin42 သို့ RippleXRP117305.15 42 Coin42 သို့ BitcoinDarkBTCD1138.38 42 Coin42 သို့ PeerCoinPPC109577.28 42 Coin42 သို့ CraigsCoinCRAIG15049867.9 42 Coin42 သို့ BitstakeXBS1408520.48 42 Coin42 သို့ PayCoinXPY576618.23 42 Coin42 သို့ ProsperCoinPRC4144319.68 42 Coin42 သို့ YbCoinYBC17.75 42 Coin42 သို့ DarkKushDANK10600066.05 42 Coin42 သို့ GiveCoinGIVE71540290.62 42 Coin42 သို့ KoboCoinKOBO7525099.08 42 Coin42 သို့ DarkTokenDT30419.42 42 Coin42 သို့ CETUS CoinCETI95400594.45
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 13:15:02 +0000.